ပန်းရောင်းရင်းရပ်တည်နေရရှာတဲ့ မိခင်ကို အသက် ၄ နှစ်ထဲက တတ်ထားတဲ့ ပညာနဲ့ လုပ်ကျွေးနေတဲ့ သားတို့အမွှာ – Shwe Yaung Lan
HomeNewsပန်းရောင်းရင်းရပ်တည်နေရရှာတဲ့ မိခင်ကို အသက် ၄ နှစ်ထဲက တတ်ထားတဲ့ ပညာနဲ့ လုပ်ကျွေးနေတဲ့ သားတို့အမွှာ
ပန်းရောင်းရင်းရပ်တည်နေရရှာတဲ့ မိခင်ကို အသက် ၄ နှစ်ထဲက တတ်ထားတဲ့ ပညာနဲ့ လုပ်ကျွေးနေတဲ့ သားတို့အမွှာ
August 5, 2021 SYL News 0
ပန်းရောင်းရင်းရပ်တည်နေရရှာတဲ့ မိခင်ကို အသက် ၄ နှစ်ထဲက တတ်ထားတဲ့ ပညာနဲ့ လုပ်ကျွေးနေတဲ့ အမွှာညီကို
ပရိသတ်ကြီးရေ ဟန်သာမိုး ဟန်သာဖြိုး အမွှာညီအစ်ကိုကို သိကြမှာပါနော်… Myanmar Got Talent ပြိုင်ပွဲမှာ ထူးချွန်စွာယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ မိုး ဖြိုးအမွှာလေးဟာ ခုဆို မိဘကို အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ လုပ်ကျွေးနေတာပါ…
အသက် ၄နှစ်မှာ သူတို့ ဝါသနာပါတဲ့ သဘင်အက နဲ့ စတင် ကခဲ့ပြီး အသက် ၇နှစ်မှာ ပြိုင်ပွဲတွေ ဝင်ပြိုင်ရင်း အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလို မအောင်မြင်ခင်က မိုးဖြိုးတို့ရဲ့ မေမေဟာ ဘုရားစောင်းတန်းမှာ ပန်းရောင်းရင်း သူတို့ညီအစ်ကိုကို ရှာကျွေးခဲ့တာပါ
ခုတော့ အမွှာညီအစ်ကိုက အမေဖြစ်သူကို ပြန်ရှာကျွေးနေနိုင်ပါပြီ…ဒီအကြောင်းလေးကို အမွှာတို့ရဲ့ မေမေက ခုလိုလူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးသားပြောပြထားပါတယ်
အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပီးဆန္ဒနဲ့ဘဝ တစ်ထပ်တည်းကျပါစေ”…သားတို့မေမေ ဆိုပြီးသားတို့အမွှာ pageမှာ ရေးသားထားပါတယ်။သားတို့အမွှာကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ငယ်ငယ်လေးနဲ့ မိခင်ကို လုပ်ကျွေးနိုင်တဲ့ သူတို့ကို ဂုဏ်ပြုစကားလေးဆိုခဲ့ပေးပါအုံးနော်..
Source ; သားတို့အမွှာ . Jeeptoolay
ါးပြီး ကြည့်ရဆိုးနေတဲ့ ဆံသားတွေကို သဘာဝအတိုင်း ပြန်ထူလာစေမယ့် နည်းလမ်းများ